Posted by Tranquillus | Feb 14, 2022 | Xirfadaha hadalka iyo qoraalka afka
Codsiga kordhinta mushaharka: kooxdaada
SUBJECT : Mushaharka 2022 kooxda subaxnimo
Marwo X, Mudane Y,
Waxaan hadda haysanay dayactirka sannadlaha ah xxxxxx. Intii aan isweydaarsanay, waxaan ka wada hadalnay kororka suurtagalka ah ee la-shaqeeyayaasha iyo nafteyda.
Waxaan rabay inaan xoojiyo codsigeyga anigoo ku siinaya tusaalooyin gaar ah oo ku saabsan hawlihii aan ku guuleystey inaan la qabto kooxdayda.
Tilmaamahaygu had iyo jeer waa cad yihiin oo habaysan.
Ujeedooyinka guud ahaan waa taxane hawlo si wanaagsan loo qeexay oo ay si buuxda u fulin karaan xubnaha kooxda.
Had iyo jeer waan dhegaysanayaa
Waxaan aad u aqaannaa sida loo garto mid walba qodobbada xoogga badan oo aan u hordhigo si aan u guuleysanno himiladeena.
Ugu dambeyntii, waaxdayda, jawigu aad buu u wanaagsan yahay. Waxaa jira isku xirnaan kooxeed weyn iyo firfircooni faa'iido u leh qof walba
qof kastaa wuxuu wajahaa masuuliyadiisa, shaqadiisa si hufan ayuu u gutaa, wuxuuna si badheedh ah u bixiyaa caawimo marka loo baahdo.
Waxaan runtii jeclaan lahaa inaad ku xisaabtanto dhammaan waxyaabahan ii muuqda ee lagama maarmaanka u ah guusha shirkad, iyo inaad siiso mushahar kordhin sanadka 2022 dhammaan shaqaalahayga. Waxay u noqon doontaa aqoonsi dhab ah iyaga iyo ka sarreeya dhammaan, kor u qaadistan yar waxay siin doontaa dhiirigelin weyn si ay u bilaabaan sanad cusub.
Dabcan waan ku sii jirayaa gacantaada oo dhan haddii aad rabto inaad mar kale ka hadasho.
Fadlan iga aqbal, Marwo X, Mudane Y, salaan aan qummanayn.
Codsiga kordhinta mushaharka: Qaybta caymiska bangiga
SUBJECT : gunnadayda 2022
Tan iyo xxxxxx, Baanka ayaa iga shaqaaleysiiyay lataliye ahaan.
Haddii aan ogolaado in aan maanta wax kuu soo qoro waxa ay tahay in aan wax ka qabto qodob qalbigayga ku dhow: gunnadayda sanadka 2022.
I ogolaw marka hore in aan ku adkaysto in dhamaadka November aan fuliyay dhamaan ujeedooyinkii aad i siisay, kuwaas oo kala ah:
Tiro ka mid ah akoonnada furitaanka oo ka kordhay xx 2020 ilaa xx 2021
Ku biirista adeegyada uu bangigu u bixiyo macaamiisha xx, tusaale ahaan wadarta qaddarka: xxxx euro.
Caymiska nolosha ayaa sidoo kale si aad ah u kordhay.
Waxa kale oo aan ka qayb galay dhammaan tababarka si aan u barto mid kasta oo ka mid ah agabka maaliyadeed ee uu Baanka ku taliyay.
Ugu dambeyntii, waxaan si cad ugu socdaa caymiska. Sida aad ii tilmaantay intii lagu jiray waraysigayagii sannadkii hore, tani waxay ii ahayd meel daciif ah. Waxa kale oo aad aqbashay in aan raaco tababar cusub, kaas oo wax badan iga caawiyay in aan u soo bandhigo macaamiishayda.
Tani waa sababta aan u ogolaado naftayda inaan codsado waraysi aan kula yeesho si aan ugala hadlo gunnadayda sanadka 2022.
Dabcan, waan ku sii jirayaa gacantaada oo dhan haddii aad u baahan tahay macluumaad dheeraad ah.
Codsiga kordhinta mushaharka: kaaliyaha fulinta
Madam Agaasime, Mudane Agaasime,
Shaqaale qaab dhismeedkayaga yar ilaa XXXXXX, hadda waxaan hayaa jagada kaaliyaha fulinta.
Waxaan sidoo kale kaaga mahadcelinayaa kalsoonida aad igu qabto.
Xirfadayda, ka jawaab celintayda iyo maalgashigayga mar walba waa la aqoonsaday. 2021, waxaan sameeyay tiro isbedel ah oo aan hoos u dhigin qaar ka mid ah kharashaadka hawlgalka, laakiin sidoo kale hagaajiyay nolosha gudaha ee shirkadda.
Waxaan ku siin karaa dhowr tusaale oo muhiim ah:
Waxaan heshiis aan hore loo arag la galay shirkad nadiifin ah. Qadarka faa'iidada ayaa sidaas lagu dhimay xx%. Inkastoo tayada shaqada uu keenay afhayeenka cusub la hagaajiyay. Dhismuhu aad buu u faraxsan yahay!
Waxaan sidoo kale ka shaqeeyay qiimaha sahayda xafiiska, sidoo kale, waxaan ku guuleystay inaan ku guuleysto xaalado wanaagsan.
Waxaan si wadajir ah u abuurnay joornaal gudaha ah oo aan ku qoray dhowr maqaal.
Ugu dambayntii, waxaan had iyo jeer diyaar u ahay inaan ka jawaabo dhammaan codsiyadaada waxaanan ku degdegayaa inaan wax ka qabto sida ugu dhakhsaha badan ee aad rabto.
Tani waa sababta aan u ogolaado naftayda inaan ku weydiiyo inaad hesho mushahar kordhin sanadka 2022, taasoo ii noqon doonta dhiirigelin dhab ah.
Haddaba waxaan rajaynayaa in aan mawduucan si wadajir ah uga wada hadalno ballan mustaqbalka ah oo aad ku heshiin doonto inaad i siiso.
Fadlan iga aqbal marwo Agaasime, Mudane Agaasime, salaan aan daacad ahayn.
Codsiga kordhinta mushaharka: wakiilka safarka
Shaqaalaha shirkadda ilaa XXXXXX, hadda waxaan hayaa jagada wakiilka safarka.
Waxaan si fiican u garanayaa in dhibaatada hadda ina haysata dhammaanteen ay saamayn gaar ah idinku yeelatay oo aad la kulantay dhibaatooyin aan la soo koobi karin. Si kastaba ha ahaatee, boos qabsigu mar kale ayaa kordhay (gaar ahaan gobollada kala duwan ee Faransiiska) iyo codsiyada kirada baabuurta ayaa sidoo kale sii kordhaya.
Tani waa sababta aan u oggolaado naftayda inaan ku codsado ballan si aan uga wada hadlo gunnadayda 2022.
Waxa kale oo aan rabay in aan sheego in laba ka mid ah saaxiibaday ay ka tageen shirkadda oo aan hadda mas'uul ka yahay galkooda. Waxaan la socdaa macaamiisha xxx halka markii hore nambarkoodu ahaa xxx kaliya. Ugu dambeyntii, waxaan sameeyay boos celin xxx sanadka 2021, taasoo u dhiganta kobac% marka la barbar dhigo 2019, sanad uusan wali dhicin Faafida Covid.
Waxaan runtii rabaa inaan muujiyo khatartayda iyo maalgashigayga shirkadda. Kor u qaadista waxay noqon lahayd aqoonsi dhab ah shaqadayda.
Codsiga kordhinta mushaharka: charterer
Shaqaalaha shirkadda ilaa XXXXXX, hadda waxaan hayaa jagada charterer.
Xirfadle run ah oo ka tirsan abaabulka gaadiidka, shaqadayda waxaa loo qaybiyaa sida soo socota:
Xidhiidhka lala yeesho macaamiisha haysta alaab ay raraan
Soo hel sideha bixin doona adeegan
Kala xaajood qiimaha
Hubi in shuruudaha macmiilka si fiican loola socodsiiyo darawalka
Hubi in alaabta la keenay
Shaqadan, oo lagu sameeyo taleefanka kaliya, waxaan xiriir aad u fiican la leeyahay macaamiisha. Waa in la sheegaa in aan dhisay shabakad dhab ah oo sideyaal ah kuwaas oo kalsoonidooda igu qaba aniga oo leh qiime adeeg oo la mid ah aniga. Sidaa darteed aad ayaan ugu jawaabayaa dhammaan dadka aan la shaqeeyona si buuxda ayay ugu qanacsan yihiin. Waxaan noqday lamaanahooda saadka oo hadda ma sii ahaan alaab-qeybiye.
Tani waa sababta ay iigu muuqatay mid sharci ah inta lagu guda jiro wareysigayagii ugu dambeeyay inaan ku weydiiyo in la kordhiyo mushaharkayga sanadka 2022. Waxaan xor u ahay inaan waxaas oo dhan qoraal ku qoro, markaa waxaad awoodi doontaa inaad qiimeyso khatartayda iyo rabitaankayga mar walba wax badan samee, had iyo jeer wax ka sii wanagsan.
Inta aan go'aankaaga sugayo, dabcan waan ku sii jirayaa gacantaada oo dhan.
Codsiga kordhinta mushaharka: soo dhawaynta
Waxaan ku heshiinay inaan dayactirka sannadlaha ah ku sameeyo XXXXXX. Inta lagu guda jiro wareysiga, waxaan jeclaan lahaa inaan ka hadalno magdhowgayga sanadka 2022. Waxay iila muuqataa inaan caddeeyey ku lug lahaanshahayga shirkadda dhexdeeda, gaar ahaan dhawrkan tusaale:
Soo dhawaynta shirkadu had iyo jeer si aan filayn ayaa loo ilaaliyaa si dadweynuhu u dareemaan nafis
Boostada iyo baakadaha waxaa had iyo jeer lagu soo diraa waqtigii loogu talagalay.
Waxaan sameeyay nidaam isgaarsiin, anigoo adeegsanaya Skype, si aan ugu sheego saaxiibkii imaatinka xirmo
Sidaa darteed waxaan oggolahay in aan codsado mushahar kordhin sanadka 2022, taas oo ii noqon doonta dhiirigelin dhab ah iyo aqoonsi gaar ah. Waxaan xitaa diyaar u ahay, dabcan, inaan qabto hawlo kale iyo mas'uuliyado kale oo hagaajin kara shaqada shirkadda sida: maareynta gawaarida gawaarida (caymiska, kormeerka, hubinta biilasha elektaroonigga ah), kiraynta. Dabcan, waxaan kuu soo jeedin karaa soo jeedino kala duwan.
Haddaba waxaan rajaynayaa in aan mawduucan si wada jir ah uga hadalno ballan mustaqbalka ah oo aad si naxariis leh ii siin doonto.
Codsiga kordhinta mushaharka: iibsadaha
Ilaa XXXXXX, waxaan ku shaqeeyaa shaqada iibsadaha gudaha Shirkadda XXXXXX.
Anigoo aqoon u leh xilka iyo waayo-aragnimadayda, waxaan dareemayaa inaan maanta diyaar u ahay inaan qabto xilal cusub.
Allow marka hore aan halkan ku soo koobo dhawr kelmadood, hawlihii kala duwanaa ee aan si guul leh u soo qabtay tan iyo imaanshahayga.
Waxaan sameeyay adeeg bixiyeyaal cusub oo u sahlay shirkadu in ay si wayn hoos ugu dhigto qiimaha qaybahayaga.
Waxaan dib u eegay dhammaan wax ku biirinta alaab-qeybiyeyaashayada ugu da'da weyn waxaana dib u eegnay tilmaamahayaga iyaga.
Waxaan sidoo kale kala xaajooday waqtiyada dayactirka si aan awood ugu yeesho inaan si degdeg ah uga jawaabo baahiyaha macaamiisheena.
Ugu dambeyntii, waxaan bartay isticmaalka mid kasta oo ka mid ah alaabta, waxaanan abaabulay dib-u-buuxinta si toos ah si waaxda wax-soo-saarku aysan weligeed u dhicin.
Sidaad la socotaan anigu mar walba waan difaaci jiray danaha shirkadda, waana sii wadi doonaa, sababtoo ah waa sida aan u arko shaqadayda.
Tani waa sababta aan u qaatay xorriyadda inaan ku weydiiyo inaad si naxariis leh i siiso ballan, marka ay kugu habboon tahay, si aan ugala hadlo.
Codsiga kordhinta mushaharka: kaaliyaha iibka
Shaqaalaha shirkadda ilaa XXXXXX, waxaan hadda hayaa booska Kaaliyaha Iibka.
Xirfadayda, ka jawaab celintayda iyo maalgashigayga mar walba waa la aqoonsaday. 2021, natiijadii la helay iyo howlgalladii aan mas’uulka ka ahaa ayaa u sahlay shirkadda in ay si weyn u horumariso adeeggeeda macaamiisha. Waxaan u oggolaaday naftayda, mowduucan, inaan soo qaato dhowr tusaale oo gaar ah:
Shirkaddu waxay dejisay, iyadoo la kaashanaysa, software cusub oo gelitaanka iyo dabagalka amarada macaamiisha. Sidaa darteed waxaan wax ka qabtaa kiisas badan maalintii: XXXXXX halkii XXXXXX ka hor.
Waxa kale oo aan sameeyay kulamo toddobaadle ah oo aan la yeesho saaxiibkay dukaanka, kuwaas oo i siinaya fursad aan ku qiimeeyo kiis kasta. Sidaa darteed waxaan ogaaday xiriirka ka dhexeeya waaxyadayada, kaas oo ii ogolaanaya inaan si wax ku ool ah uga jawaabo macaamiisheena maadaama aan siin karo xal degdeg ah.
Ugu dambeyntii, waxaan qaatay casharro Ingiriisi sanadka oo dhan iyada oo loo marayo CPF, muuqaal ahaan, fiidkii guriga. Waa run in ay tahay tababar shaqsiyeed, laakiin xirfadahan ayaa dhamaantood ka sarreeya faa'iidada shirkadda maadaama aan isticmaalo maalin kasta gudashada waajibaadkeyga.
Sidaas awgeed waxaan oggolaaday nafteyda inaan codsado mushaar kordhin sanadka 2022, taasoo ii noqon doonta dhiirigelin dhab ah.
Codsiga kordhinta mushaharka: ganacsi fadhiid ah
Shaqaale ka tirsan shirkadda ilaa XXXXXX, hadda waxaan hayaa booska ganacsi ee fadhiya
Tan iyo taariikhdaas, waxaan wanaajiyey xirfadahayga tan iyo markii aan helay dhammaan aqoonta farsamada ee lagama maarmaanka u ah in laga jawaabo su'aalaha macaamiisha iyo in aan soo saaro xigashooyin. Waxaan raacay koorasyo ​​tababar oo badan kamana cabsanayo inaan weydiiyo waaxda wax soo saarka inay fahmaan sida qayb u shaqeyso iyo habka wax soo saarkeeda.
Hadda wixii ka dambeeya, aad ayaan uga falceliyaa oo tirada qiyaasaha aan dejiyo ma joogsanayso koritaanka. Runtii, 2021, waxaan sameeyay xigashooyin xx halka 2020, nambarku ahaa xx.
Ugu dambeyntii, sida aad ogtahay, waxaan si buuxda u maalgeliyay shaqadayda, mar walbana waan diyaar ahay. Dadka iibka ah ee aan la shaqeeyo waxay xaqiijin doonaan inaan si joogto ah ugu adeego macaamiishooda.
Sidaa darteed waxay iila muuqataa in aan si weyn u hagaajiyay tayada xidhiidhka mustaqbalka iyo macaamiisheena caadiga ah.
Qabashada balamaha u qalma ayaa sidoo kale la sameeyay. Tani waxay awood u siisay wax-is-beddelka inuu kordho xx% sanadkan.
Gacantaada oo dhan waan ku jiraa.
Codsiga kordhinta mushaharka: xisaabiye 1
Si aan u daba galo waraysigayaga xxxxxx, waxaan ogolahay naftayda in aan qoraal ku sameeyo qodobbada la soo qaaday ee khuseeya gunnadayda sannadka 2022.
Marka hore waxaan rabaa in aan ku xasuusiyo in aan xisaabiyenimo ku shaqaynayay ilaa xxxxxx gudaha Shirkada YY runtiina aan jeclahay shaqadayda.
Waxaan si wadajir ah dib u eegnay howlgalladii la fuliyay 2021-ka waxaadna xaqiijisay inaad ka mahadcelisay maal-gelintayda iyo in ka sarreeya dhammaan guusha mid walba.
Sidaa darteed, waxaan sameeyay xaashi hadhaaga maaliyadeed bil kasta kaaso kaa caawiyay inaad go'aamo gaadho oo aad maamusho shirkada sida ugu macquulsan.
Waxaan sameeyay kormeer gaar ah oo ku saabsan lacagaha macmiisha ah, waxaana taas ku mahadsan, lacagihii la bixin jiray si weyn ayaa loo dhimay. 2020, waxaan helnay wadarta ……………
Sidaa darteed waxaan ogolahay naftayda inaan ku celiyo codsigayga mushahar kordhinta sanadka 2022, taas oo runtii ii noqon lahayd dhiirigelin.
Sida cad anigaa gacanta ku haya haddii aad rabto inaad mar kale ka hadasho.
Codsiga kordhinta mushaharka: xisaabiye 2
Tan iyo xxxxxx gudaha Shirkadda, waxaan isticmaalaa shaqada xisaabiyaha waxaanan si gaar ah u maamulaa arrimaha bulshada.
2-dii sano ee la soo dhaafay 2020 iyo 2021 ayaa si gaar ah aniga iigu darnaa. Faafida aan hore loo arag iyo xaaladda cakiran ee aan maamulnay ayaa igu kaliftay inaan la qabsado arrimo kala duwan. Tababar la'aan, waxay ahayd lagama maarmaan in la abuuro qaybo cusub oo ka mid ah warqadaha mushaharka. Waxaan sidoo kale mas'uul ka ahaa soo celinta qayb ka mid ah shaqo la'aanta iyo dhammaan xiriirka maamulka. Intii uu ku guda jiray xisaab xirka xisaabiyaha ayaa sidoo kale carabka ku adkeeyay in aysan jirin wax qalad ah oo dhacay.
Waayo-aragnimadani aad bay ii hodminaysay, waxaanad mooddaa inaan si weyn u qaatay caqabadda. Wax badan ayaan galiyay si uu adeeggu u shaqeeyo si caadi ah iyo in asxaabteyda aysan dhibaato soo gaarin, marka laga reebo waxyeelada uu sababay cudurkaan, dhibaatooyin dheeri ah.
Sidaa darteed aad bay ii faa'iido u yeelan lahayd in aan awoodo in la ii kordhiyo mushaharkayga.
Sida cad anigaa gacanta ku haya haddii aad rabto inaad ka hadasho wakhtiga ballanta.
Codsiga kordhinta mushaharka: sameeysa
Shaqaalaha shirkadda ilaa XXXXXX, hadda waxaan hayaa jagada horumariyaha.
Tan iyo taariikhdaas, waxaan sii waday hagaajinta codsiyada kala duwan ee shirkadda.
Sidaad ogtahay, waxaan hogaaminayay dhowr mashruuc oo keenay iib.
Sidoo kale waxaan ahay taageeraha macmiilka ee isticmaalka mareegahayaga cusub wax walbana si fiican ayay u socdaan.
Ugu dambeyntii, waxaan hadda soo saarayaa codsi wax ka bedeli doona habka shaqadeena oo wax walba u badbaadin doona wakhti qaali ah dhammaan shaqaalaha shirkadda.
Waxaan ahay mid hal abuur leh, waxaan had iyo jeer ka faa'iidaysta xalalka ugu habboon si aan u helo nidaam kombuyuutar oo la isku halayn karo oo dareen leh. Waxaan si buuxda u maalgeliyay shaqadayda oo si joogto ah ayaan diyaar u ahay.
Markaa waxay iila muuqataa inaan qof kasta shaqadiisa si weyn u hagaajiyey. Runtii mar walba waxaan baadhayaa sida ay tignoolajiyada cusub u horumariyaan, sidoo kale waxaan hubiyaa sida mareegaha tartamayaashayada loo meeleeyo.
Codso mushahar kordhin: pmeel walba 1
Shaqaale ka tirsan shirkaddaada xx sano, hadda waxaan hayaa jagada.
Dhawr bilood hadda, waxa aan arkay in aad i siisid hawlo badan oo aan ku gudan karo iyo in badan oo xilal ah. Waan ku faraxsanahay oo aan ku faraxsanahay inaan ka qaybqaato horumarinta shirkadda.
Sida aad shaki la'aan u ogaatay, ma tirin doono saacadahayga, anigu dhab baan ahay, mar walba shaqadeyda ayaan ku dhammeeyaa waqtigii loogu talagalay, xirfadeydana sidaas ayey u horumartay.
Tani waa sababta aan u jeclaan lahaa inaan ka faa'iidaysto mushahar kordhinta sanadka 2022. Mushaharkaygu wuxuu markaas noqon doonaa mid waafaqsan waajibaadkeyga.
Shirkadda iyo jagada aan hayo waxay si buuxda u buuxinayaan filashadayda. Waxaan dareemayaa qanacsanaan, waxaanan qadariyaa qiimaha asxaabtayda. Had iyo jeer waan is taageernaa oo waxaan leenahay hal ujeedo: ku qanacsanaanta macaamiisheena.
Tani waa sababta aan u jeclaan lahaa inaan haysto ballan si aan uga wada hadlo codsigayga.
Dabcan waan ku sii jirayaa gacantaada oo dhan taariikhda iyo wakhtiga waraysigan.
Codso mushahar kordhin: pmeel walba 2
Shaqaalaha shirkadda ilaa XXXXXX, hadda waxaan hayaa booska xxxxx waxaanan ku yeelannay wareysi xxxxxx.
Inta lagu guda jiro wareysigan, waxaad muujisay dhowr qodob oo horumar ah:
Ka jawaab celintayda
Khalad higaada oo aad u badan ayaa fariimahayga ku jira
Haddaba waxaan tixgaliyay 2-daan qodob oo ii muuqda inay muhiim yihiin. Waxaan awooday inaan horumariyo xirfadahayga. Runtii, aniga oo gacan ka helaya CPF, waxaan raacay tababar Faransiis ah iyo gaar ahaan xagga higgaadda iyo naxwaha. Dhammaan saacadaha XX ee casharrada. Saacadahaas waxbarasho waxay ii oggolaadeen inaan si weyn u wanaajiyo qorista fariimahayga. Waxa aad ii tilmaantay tan, oo aan aad ugu bogay.
Marka la eego jawaab-celintayda, waxaan go'aansaday inaan isticmaalo, sida aad soo jeedisay, Muuqaalka si aan isu diiwaan geliyo oo aan u kala saaro dhammaan hawlaha aan qabanayo inta lagu jiro maalinta. Sidaa darteed, ma ilaawin mar dambe, waxaanan hubinayaa in dhammaantood la dhammaystiray iyo waqtigii loogu talagalay. Shakhsi ahaan, habkan cusub waxaan ka helaa raaxo gaar ah oo shaqada ah iyo gaar ahaan, waxaan ahay qof deggan.
Waxaan rajeynayaa inaad qadarin dadaalkan isbeddelka ah iyo dadaalkayga aan ku horumarinayo.
Codsiga kordhinta mushaharka: qareen
Khabiirka sharciga, waxaan ahay la taliyahaaga iyo lataliyahaaga mudnaanta leh dhammaan dhibaatooyinka sharciga ee Shirkadda.
Si gaar ah, waxaan daryeelayaa difaaca danahaaga ee khuseeya hantida warshadaha, iyo sidoo kale dhammaan codsiyada patent-ka iyo ilaalintooda.
Waxaan sameeyaa sirdoon tartan ah mana ka waabanayo inaan farageliyo haddii ay dhacdo shakiga nuqullada shatiyadaada. Waxaan ilaaliyaa danaha shirkadda maalin kasta.
Sannadkan, waxaan si gaar ah ula socday faylka YY kaas oo walaac weyn nagu abuuray, waqti aad u dheer ayay qaadatay in la sameeyo iyadoo la kaashanayo qareennada, waxay ahayd mid aad u adag. Laakiin, wax badan ayaan shaqeeyay, waxaan raadiyey oo helay dhammaan ceebaha cadaawayaashayada. Waxaana ku soo baxnay guul!
Waxaan sidoo kale falanqeynayaa dhammaan qandaraasyada, khatarta suurtagalka ah, waxaan daawadaa isbeddellada sharciga. Waxaan diyaar u ahay dhammaan waaxyaha shirkadda si aan uga jawaabo dhammaan su'aalaha oo aan hubiyo in wax walba ay hagaagsan yihiin.
Hadda waxaad garanaysaa halistayda, helitaankayga iyo tayada shaqadayda.
Tani waa sababta aan u ogolaado naftayda inaan ku waydiiyo in la kordhiyo mushaharkayga sanadka 2022.
Waxaan ku hadhayaa awoodaada oo dhan inaan ka hadlo marka aad rabto.
Codsiga kordhinta mushaharka: kaydiye
SUBJECT: gunnadayda 2022
Shaqaalaha shirkadda ilaa XXXXXX, waxaan hadda hayaa booska kaydiyaha, maareeyaha bakhaarka.
Xirfadle run ah oo ku jira abaabulka iyo diyaarinta amarada, waxaad i siisay, 2021, mas'uuliyado badan oo badan
Waxaan shaqaaleysiinay maamule cusub. Sidaa darteed waa inaan jadwal u sameysaa amarradiisa si aan u diyaargaroobo, shaqadiisa u hubsado waqti ka waqti oo aan caawiyo marka loo baahdo.
Waxaan maamulaa dayactirka maraakiibta qalabka wax lagu qaado
Waxaan galiyaa dalabaadka macmiilka ERP
Sidoo kale waxaan galaa dalabaadka alaab-qeybiyaha
Waxa kale oo aan aad ugu faraxsanahay kalsoonida aad i siisay waxaanan si buuxda u qaadanayaa waajibaadkayga cusub. Xataa waxaan dhihi karaa waan ka soo baxay shaqadayda.
Sidaad xustay, wax khaladaad ah ayaa nagu dhacay dalabaadka macaamiisha sanadkan. Intaa waxaa dheer, waxaan la sameeyay wada-shaqeyn lala yeesho shirkadaha qaada, halkaasna, wax dhibaato ah nagama qabin marka laga reebo 3 dib-u-dhac ah oo keenista 2021.
Waxa kale oo aan inta badan la xidhiidhaa macaamiisha shixnadda alaabta, wax walbana si wanaagsan ayay u socdaan.
Codsiga kordhinta mushaharka: suuqgeyn
Waxaan hadda ku yeelanay waraysiga sannadlaha ah xxxxxx kaas oo aan ka wada hadalnay magdhowgayga 2022 iyo korodhka suurtagalka ah.
Waxaan rabay inaan xoojiyo codsigeyga anigoo ku siinaya tusaalooyin gaar ah oo ku saabsan hawlo guul leh:
Shirkaddu waxay hadda aad ugu badan tahay shabakadaha bulshada. Maalin kasta, waxaan dhejiyaa sawir leh qoraalka ugu il-qabsiga badan ee suurtogalka ah. Taas awgeed, waxaan la xidhiidhaa wakiilada iibka oo aan ka soo ururiyo macluumaadka macaamiisha iyo amarada aan helnay iyo sidoo kale goobaha aan ka qayb galnay.
Waxaan hadda u dirnaa wargeys 15 maalmood kasta macaamiishayada. Gebi ahaanba waan qoraa, qaybintana waan daryeelayaa.
Ugu dambayntii, waxaad xustay ka-qaybgalkayga shirkadda. Waxaan ahay isha fikradaha cusub iyo kuwa asalka ah. Waxaan gebi ahaanba aqbalay dhaleecaynta aan si habaysan ula socdo soo jeedinta lidka ku ah. Had iyo jeer waxaan raadiyaa xal.
Sidaa darteed waxaan oggolahay in aan mar kale ku weydiiyo mushahar kordhin sanadka 2022. Tani waxay noqon doontaa aqoonsiga dhabta ah ee qiimaha shaqadayda.
Codsiga kordhinta mushaharka: xoghayaha caafimaadka
Shaqaalaha shirkadaada ilaa XXXXXX, waxaan ogolahay naftayda inaan ku waydiiyo ballan si aan uga wadahadlo lacagtayda 2022.
Marka hore waxaan kaaga mahad celinayaa kalsoonida aad igu qabto.
Xirfadayda, ka jawaab celintayda iyo maalgashigayga mar walba waa la aqoonsaday. Sannadkan, waxaan qaaday dhowr hindise oo aan hubo inay keeneen horumar la taaban karo oo ku yimid shaqada shirkadda.
Dhismuhu si fiican ayaa loo ilaaliyaa oo si joogto ah ayaa loo jeermiyaa. Waxaan dhigay, sidaad i waydiisay, gabadh nadiifin ah oo timaada 2 ilaa 3 jeer maalintii. Sidaas awgeed waa badbaado bukaannada, laakiin sidoo kale annaga.
Ballamaha waxaa loo sameeyaa si waafaqsan rabitaankaaga iyo jadwalkaaga. Waxaan ku shaqeynaa ruux kooxeed wanaagsan, waxaana leenahay isla qiimayaal: si aan u siino daryeel tayo leh bukaannadaada.
Daqiiqadaha wada-tashiga waxa si degdeg ah loo qoraa booqasha kasta ka dib waxaana loo diraa asxaabtaada haddii loo baahdo. Wax dib u dhac ah ma hayo.
Ugu dambayntii, had iyo jeer diyaar ayaan u ahay oo ma xisaabinayo saacadahayga haddii bukaannadaadu ii baahan yihiin.
Tani waa sababta aan jeclaan lahaa inaan isla qaadanno inaan ka wada hadalno mowduucan inta lagu jiro ballan mustaqbalka ah oo aad si naxariis leh ii siin doonto.
Codsiga kordhinta mushaharka: farsamayaqaan
Waxaan dhawaan ku kulanay waraysigayga gaarka ah, xxxxxx. Intii ay socotay doodan, waxaan codsaday in la kordhiyo mushaarka aan qaato sanadka 2022. Waxaan rabay in aan qoraal ku qoro dhammaan qodobbadii aan soo sheegnay si aan idiinku tuso dhammaan waxqabadkii aan fuliyay.
In badan iyo in ka badan ayaan u raacaa iibiyeyaasha macaamiisha si aan u bixiyo taageero farsamo
Waxaan ka caawiyaa wax soo saarka ka hor inta aan la bilaabin qaybo cusub iyo in aan hubiyo in wax walba ay waafaqsan yihiin amarka
Waxaan kaga jawaabaa taleefoon iyo iimayl macaamiisha haysta su'aalaha farsamada inay weydiiyaan
Waxaan hubiyaa xigasho kasta
Waxaan dejiyaa qorshayaasha ansixinta
Markaa waxaan u maleynayaa in dhammaan xirfadahan ay yihiin qiimo dhab ah oo lagu daray shirkadda.
Waxaan si gaar ah u madax bannaanahay. Jawaabahaygu had iyo jeer waa kuwo la isku halleyn karo oo degdeg ah.
Dabcan waan ku sii jirayaa gacantaada oo dhan haddii aad rabto inaad mar kale kala hadasho mushaharkayga.
Waxaan aad ugu mahad celinayaa fahamkaaga iyo dhiirigelinta aad ii muujisay intii aan ku guda jiray waraysiga sannadlaha ah.
Codso mushahar kordhin: teleprospector
Shaqaale ka tirsan shirkadda ilaa XXXXXX, hadda waxaan hayaa booska teleefishinka.
Tan iyo taariikhdaas, waxaan helay waayo-aragnimo adag oo ii oggolaanaysa inaan si weyn uga gudbo dhammaan ujeedooyinka la dejiyay.
Runtii, marka loo eego tirooyinka, waxaan ahay mid ka mid ah kuwa ugu wanaagsan telemarketers:
Waxaan maareeyaa in aan sameeyo xxx wicis maalintii
Waxaan helay taariikh xx
Waxaan maareeyaa in aan dhamaystiro amaro badan
Warbixinadayda, kuwa wax iibinaya, aad bay u cad yihiin waxaana ku jira dhammaan macluumaadka ay u baahan yihiin booqashooyinkooda.
Marka la barbar dhigo 2020, aad baan ugu hufanahay, sababtoo ah si fiican ayaan u garanayaa wax soo saarkayga, waxaanan ku dareemayaa raaxo badan rajooyinka. Hadda waan kasbaday falcelintooda, sidaas ayaan u saadaaliyaa jawaabahooda waxaanan diyaariyay dood aan kaga gudbo filtarrada ugu horreeya.
Waa hawl aad u adag, sababtoo ah dadka nagula hadlaya wakhti ma haystaan ​​inay nala hadlaan, waxaanan si joogto ah u helaa weedha yar, kelmadda yar ama la-hadalka taasoo markaa horseedi doonta ballan.
Tani waa sababta aan u ogolaado naftayda inaan codsado waraysi aan kula yeesho si aan ugala hadlo gunnadayda sanadka 2022. Runtii waxaan kaaga baahanahay dhiirigelin iyo dhiirigelin si aan u sii wado had iyo jeer waxtarka iyo kordhinta dakhliga shirkadda.
Codsiga mushahar kordhinta ee email ahaan Febraayo 24, 2022Tranquillus
horeKaalmada fasaxa ee aan la qaadanin dhibaatada caafimaad awgeed waa la dheereeyaa
socdaShaqaalaha ku jira fasaxa dhaqdhaqaaqa waxay ka faa'iideysan karaan nidaamka Kala-guurka Wadajirka ah